(Oromedia, 24 Waxabajjii 2020) Ajajaan WBO Zoonii Lixaa ummanni Oromoo lolee mirga isaa akka kabachiifatu dhaamsa dabarse. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews(Oromedia, 24 Waxabajjii 2020) Ajajaan WBO Zoonii Lixaa ummanni Oromoo lolee mirga isaa akka kabachiifatu dhaamsa dabarse.
Geerrarsa-WBO ZOONII LIXAA-24 Waxabajjii 2020
“Lubbuu isaa sabaaf kenne…”
Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marrii Dirribaa dhaamsa Waxabajjii 24 bara 2020 dabarseen “kabajaan afaan qawwee jira” jedheera.
“Sabni xiqqoon, hanga funyaaniitti hidhate yeroo of kafalchiisu; sabni guddaan, garuu hidhannoo wal hiikkachiise yeroo akka malee tuffatamu agarre,” kan jedhe Jaal Marroon, adeemsi kunis Oromoo tuffachiisuu bira darbee akka ajjeechisaa jiru hubachiiseera.
“Tuffiirra darbees akka maleetti ajjeefame,” jedhe Jaal marroon.
Oromoon baruma baraan yeroo taa’ee dhaanamu argaa guddachuu kan ibse Jaal Marroon, “Oromoo dhaanee nama boossisu an takkaa hin agarre. Amaara, Sumaalee, Tigree, Afaan, Beenshaangul… warri kun yeroo Oromoo qehee isaarratti gurra qimmiidanii boossisan arguun garuu salpha,” jedheera.
Dhuma irrattis Oromoo douu dhiisee hojiitti akka jabaatu dhaamsa jabaa dabarseera.
“Oromoo oduu dhiisii, hidhuu walhidhachiisi! Addunyaan tola hin beektu, of hin gowwomsiin!”
Jaal Marroon kabajaan qawwee keessa akka jirus dhaamasa kana keessatti dabarseera.
“Kabajaan Afaan Qawwee Jira!!”
Jaal Marroo Dirribaa ajajaa WBO Zoonii lixaa kan dhaloota Qubee keessaa bahee mirga ummata Oromoo kabachiisuuf of kennee qabsoo hidhannootti jiruu dha.
Nagaan walhubannaan malee, wallolaan hin dhufu!
Nagaan Oromoo Haa Kabajmu!!
Harka kee dhiqadhu, yeroo qufaatuu fi haxifattu afaan keetiifii funyaan kee hagoogi, wal irraa fageenya eeguuf meetirii 1.5 namoota kaan irraa hiiqi. Yoo si dhukube mana turi. Maatii kee hin qunnamin hojiidhaas hin deemin. Yoo mallattoo coronavirus qabaatte ilaalamuu qabda.
Yoo dandeesse, mana teessee dalaguu itti fufuu qabda. Yoo maatii yookaan hiriyoota kee ilaaluuf deemte, wal irraa hiiqiinsa kee eegachuu qabda – harka wal-fuudhuufii wal hammachuun hin jiru. Kun eegannoo namoota ati jaalattuuf tahuudhaan gargaara